समाजमा हिंसा बढ्दो, दैनिक १० देखि १५ जनाले गर्छन् उजुरी | नेपाली पब्लिक समाजमा हिंसा बढ्दो, दैनिक १० देखि १५ जनाले गर्छन् उजुरी | नेपाली पब्लिक
समाजमा हिंसा बढ्दो, दैनिक १० देखि १५ जनाले गर्छन् उजुरी
नेपाली पब्लिक २०७६, २९ श्रावण बुधबार १४:३९
काठमाडौँ – उदयपुर घर भई हाल शान्तिनगर बस्दै आएकी अस्मिता (नाम परिवर्तन) विवाहित भएर पनि अहिले एक्लै बस्दै आएकी छिन्। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कारण उनले पढ्न पाएकी थिइनन्। उनको सानै उमेरमा विवाह भएको हो। श्रीमानसँग पाँच वर्ष मात्रै बिताएकी उनले सँगै बस्दा जहिले पनि श्रीमानको हिंसामा परिरहिन्। सहन सकुन्जेल त सहिन्, नसकेपछि महिला आयोगमा गएर उजुरी दर्ता गरिन्। त्यसपछि छलफलबाट उनी हिंसाबाट मुक्त भइन्।
यस्तै, सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल नयाँ बानेश्वर बस्दै आएकी मुना (नाम परिवर्तन) पनि लामो समयदेखि माइतमा बस्दै आएकी छिन्। उनी प्रेमविवाह भए पनि सम्बन्ध समुधुर हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। उनका श्रीमान् ड्राइभर थिए भने उनी निजी कार्यालयमा काम गर्न जान्थिन्। निजी कार्यालयमा काम गर्ने हुँदा श्रीमानले सधै शंकाको घेरामा राखेर हेर्थे। श्रीमानले सधैँ शंकालु दृष्टिले हेर्ने गरेका कारणले उनी मानसिक तनावमा परिन्। अन्ततः उनी न्यायका लागि महिला आयोगमा पुगिन् र कानूनअनुसार सम्बन्धविच्छेद गरिन्।
यी दुई महिला त केवल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। नेपालमा यस्ता कैयौँ महिलाहरू हिंसामा पर्ने गर्दछन्। महिला सशक्तिकरणको कुरा गरिरहँदा पनि धेरै महिलाहरू हिंसाको शिकार बनिरहेका छन्। समाजमा प्रत्येक दिन महिलाहरू विविध खालका हिंसामा परिनै रहने गर्दछन्।
विगतमा महिलाहरू सधैँ पुरुषहरूको अडानमा बस्ने र हिंसा सहेर बस्ने गर्दथे भने अहिले त्यसमा परिवर्तन आएको छ। महिलालाई शिक्षाको पहुँच र महिला सशक्तिकरणले गर्दा पनि उनीहरूमा सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने जनचेतना आइसकेको छ। समाजको विकासक्रमसँगै पछिल्लो समय महिलाहरू पनि धेरै अघि बढ्न थालिसकेका छन्। तर महिलाहरूमा जति नै जागरुकता आए पनि महिला हिंसा भने अझैसम्म रोकिन सकेको छैन।
राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला सशक्तिकरणका बारेमा विभिन्न कार्यक्रम तथा नीति अपनाउँदै आइरहेको छ। शिक्षाको पहुँच र महिला सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमका कारण महिलाहरूमा हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने जनचेतना जागृत भए पनि आयोगमा हिंसासम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्नेको संख्यामा झनै वृद्धि हुँदै गइरहेको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ। आयोगका अनुसार प्रत्येक दिन १० देखि १५ जनासम्मको उजुरी दर्ता हुने गर्दछ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा १ हजार ४ सय ७४ जनाले हिंसाका उजुरी दर्ता गरेका छन्। जसमा घरेलु हिंसाका १ हजार ३ सय १८ र बाँकी १ सय ५६ जना महिला हिंसाका उजुरी रहेका छन्। यसले के प्रमाणित गर्दछ भने महिला हिंसाभन्दा पनि घरेलु हिंसा पर्नेको संख्या अधिक रहेको छ।
यस्तै, महिलाहरूको हक हितको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि विकासको मूल प्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रूपमा समाहित गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगले विभिन्न कार्यक्रम तथा नीति नियम बनाउँदै आइरहेको छ। आयोगले महिलामाथि भइरहेको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभेदलाई चिर्दै महिला सशक्तिकरणका लागि अनवरत कार्य गर्दै पनि आइरहेको छ।
कस्ता हिंसामा पर्छन् महिलाहरू ?
आयोगमा प्रत्येक दिन फरक–फरक खालको हिंसामा परी उजुरी दर्ता हुने गर्दछ। यसैगरी आयोगको आव २०७४/७५ को तथ्यांकअनुसार महिला हिंसा र घरेलु हिंसा दुवै गरेर मानसिक हिंसामा बढी उजुरी परेको छ। जसको संख्या ४ सय ३६ रहेको छ। यस्तै, शारीरिक हिंसा (कुटपिट) ३ सय ९८, आर्थिक हिंसा ३ सय ५, यौनजन्य हिंसा ६७, जबर्जस्ती करणी १४, नागरिकता ४७, बहुविवाह ७४, सम्बन्ध विच्छेद ९१, विवाह दर्ता तथा जन्मदर्ता १ सय ४४, अंश माग १ सय १२, सम्पर्कविहीन भएको ४१, डर, त्रास, धम्की ९०, विवाह नगरी सँगै बसेर हुने हिंसा ११, दाइजोको निहुँमा हुने हिंसा १३ र अन्य विविध हिंसामा परेका महिलाहरूले उजुरी दर्ता गरेका छन्।
उजुरी दर्ता भई कारबाहीमा परेका
आयोगले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा आव २०७४/७५ मा ५ सय ४५ जनालाई कारबाही गरी टुङ्ग्याएको छ। आयोगमा दर्ता हुन आएका उजुरीहरूउपर अध्ययन गरी प्रारम्भिक दृष्टिबाटै महिला अधिकारको प्रयोग गर्न नदिएको वा वन्चित गरेको, कुनै हिंसा, सामाजिक कुरीतिबाट महिला पीडित भएको देखिएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आयोग आफैँले आफ्नो क्षेत्रकारभित्र पर्ने उजुरीहरूउपर मेलमिलापमार्फत कारबाही टुङ्ग्याउँदै आइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी ध्रवराज क्षत्रीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘आव २०७४/७५ मा आयोगमा परेका ८ सय ३८ उजुरीहरूमध्ये १ सय ३१ वटा उजुरीमा दुवै पक्षलाई आयोगको रोहवरमा सहमत गराई मेलमिलापमार्फत टुङ्ग्याइएको थियो।’
यस्तै, आवको २०७५/७६ मा उजुरी परेको १ हजार ४ सय ७४ जनाले उजुरी दर्ता गरेका थिए। त्यसैगरी, उजुरी परेकामध्ये २ सय ५९ जना आयोगको रोहवरमा सहमत गराई टुङ्ग्याइएको छ। महिला आयोगले नटुङ्गिएको अवस्थामा आयोगले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर अन्तिम निर्णयमा पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
आयोगले विभिन्न संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएकोमा ल्याकमा ३ सय ६२, सेलेल्र्डमा १९, बार एशोसिएशनमा १ सय १२, साथी/सिविन १ सय ७ र अन्य निकायमा २ सय ८५ जनालाई छलफल गरी विवाद टुङ्ग्याएको उनले बताए।
यति मात्र नभई उजुरीमा आएका व्यक्तिहरू कार्यालयमै कुटपिटसमेत गरेकोे उनले बताए। उनले भने, ‘हिंसामा परेका महिलाहरूले उजुरी दर्ता गर्छन् तर श्रीमान् भने सम्पर्कमा नआई फरार हुने धेरै घटना छन्।’
आयोगसँग सहकार्य गर्ने संघसंस्थाहरू
राष्ट्रिय महिला आयोगले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेका छन्। जसमा आयोगले तीनवटा संस्था ल्याक, सेलेल्र्ड र बार एशोसिएशनसँग सम्झौता गरेका छन्। यी संस्थाहरूमा आयोगले सहकार्य गर्दै काम गरिरहेको छ। उनका अनुसार आयोगमा विवाद टुङ्ग्याउन नसकेमा यी संस्थाहरूमा कानूनी उपचारका लागि पठाइने गरेको छ।’
साथै, साथी÷सिविनले पनि आयोगमा आएका पीडितहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पीडितको कुनै व्यवस्था नरहेको खण्डमा करिब ६ महिनासम्म संस्थाले आश्रयको व्यवस्था मिलाइदिन्छ। यस संस्थाले हिंसामा परेका महिलासँग आफ्नो सन्तान छन् भने उनीहरूको पढाइको व्यवस्था मिलाउने गर्दछ।’
आयोगका अनुसार यसैका लागि आयोगले वार्षिक अनुदान दिएर सहकार्य गर्दै आएको हो। हिंसामा परेका महिलाहरूले धेरै आकस्मिक सेवाका लागि हेल्पलाइन ११४५ मा फोन गर्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए।
महिला आयोगमा बजेट कति ?
आयोग नेपाल सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूको बजेटमा चल्दै आइरहेको छ। आयोगलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि नेपाल सरकारबाट रू. ४ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने विश्व बैंकले ७ करोड अनुदान दिएको छ। जसमा आयोगको जम्मा बजेट ११ करोड ३० लाख रहेको छ। यति थोरै बजेटले आयोगलाई नपुग्ने उनको दाबी छ। उनले भने, ‘सरकारलाई बजेटसम्बन्धी कुरा राख्यो भने विश्व बैंकबाट त्यति धेरै अनुदान आएको छ त्यसैबाट पुग्छ भन्दै सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ।’